Fiantsoana maika! Mila mametraka ny haino aman-jery amin'ny hetsika isika ankehitriny! : Martin Vrijland
De Telegraaf dia nanova ny anarany ho lahatsoratra lafo be 'extra' ka 'premium'. Raha te hamaky an'io vaovao novokarin'ny tena io ianao dia tsy maintsy miditra voalohany amin'ireto gazety izay nanoratra ihany koa ho fankasitrahana ilay mpanefy ao amin'ny 40 / '45. Fantatsika izao fa eo an-tanan'ny miliara John de Mol ny ANP ary fantatsika ihany koa fa afaka maka sary an-java-mahaliana tokoa ity fianakaviana ity, satria afaka mamokatra programa isan-karazany malaza na mampihomehy izy ireo ary tia mijery ny mpijery miaraka amin'ny tarehimarika mijery be sivana. basy. John de Mol dia nanjary 'feon'i Holland' niaraka tamin'ny ANP ary nanan-kery lehibe tamin'ny fahitanao ny zava-misy.
Izany no antony izao ankehitriny izao ho fanovana lehibe. Fotoana tokony hamoahana ny fampahalalam-baovao amin'ny filalaovana tsara. David Icke nametraka azy tao anaty resadresaka etsy ambany raha nilaza izy fa ny fahadalana dia lasa normal. Fotoana tokony hampiakarantsika ny fitenenana ny marina hambara sy hamongorana ny lainga amin'ny filalaovana. Efa ela be izahay dia nanaiky fa ny haino aman-jery mahazatra dia afaka mamoaka vaovao sandoka ary hiala amin'izany. Avy eo izy ireo dia lasa lavitra mba hamoaka tranokala vaovao hosoka hanodinana ny sain'ireo famoaham-baovao tamin'ny taon-dasa ary hiteny fa avy any Rosia ny vaovao sandoka rehetra.
Fotoana izao hanohanana an'ity tranokala ity ary indrindra indrindra hanadino ny fampahalalam-baovao mahazatra amin'ny lalao. Isaky ny mividy na mamaky gazety toy izany ianao dia omena ny maha ara-dalàna anao. Hanao fanambarana mazava isika amin'ny fanaovana ankivy ny media. Ho valin'izay, tohizo ny asako amin'ny alàlan'ny fahatongavako mpikambana ka ahafahako manohy manoratra momba ny fitaka sy fitaka efa nilalao. Eny, mazava ho azy, afaka miady hevitra ianao fa efa manana olona toa an'i David Icke, koa maninona no hanohana ahy foana ianao? Mieritreritra anefa aho fa i David Icke dia olona avy amin'ny haino aman-jery taloha sy politika, ary indrisy fa azo fehezina fotsiny izy. Tsy afaka manoratra pills matavy be dia be avy amin'ny boky ianao, manamboatra horonantsary, manidina antsasa manerantany ary manoratra lahatsoratra isan'andro. Izany no asan'ny lehilahy 10 mitambatra ao amin'ny olona 1. Tsy maintsy misy fanampiana any ambadika izay, na dia eo aza ny karisaom-pianakaviana mahavelona azy. Mino aho fa ny fantsom-pahefana amin'izao fotoana izao dia manana fahamarinana 95% izay nateraka tamin'ny alalàn'ny olona mafana fo, kanefa tao anatin'izany fotoana izany dia nanafina baomba tao amin'ny rihana roa izy. Mihetsi-po izy rehefa mila tsofina ny hetsiky ny fahamarinana.
In ny lahatsoratra teo aloha Naneho ohatra maro momba ity fomba ity hanilihana ny hetsika fahamarinana aho. Miaraka amin'i David Icke, mihevitra aho fa momba ny tantara reptile izany. Icke dia nanambara fa ny ra elitistika dia tahaka ny reptilian-miova izay afaka miova endrika. Io ampahany amin'ny tantarany io, raha ny hevitro dia niniana natao hifangaro miaraka amin'ny ambiny; izay sisa tavela ho toy ny fahamarinana tanteraka.
Na dia resy lahatra aho fa miaina amin'ny zava-misy tsy mitovitovy ary afaka manana fisehoan-javatra isan-karazany izay tsy takatry ny maso ny maso (raiso ny anjely sy demonia ara-baiboly, ny vazivazy ao amin'ny CORAN na ny tantara momba ny fahitana UFO) dia tapitra ny tantara. hazakazaka extraterrestrial izay hitantana ny tranolay eto, raha ny hevitro dia fitaka. Ao amin'ny ity ampahany ity ny sabattianism voalaza tao amin'ny tafatafa tany London Real, Icke dia eo amin'ny lalana marina arak'izay mahaliana ahy, saingy mieritreritra aho fa lavitra loatra dia ny fanasokajiana an'io vondrona io amin'ny reptil amin'ny endrika mihetsika. Aleoko miantso an'io vondrona io ny ra làlan'ny avatar izay tarihin'ny mpanamboatra an'io simulation io; lasa Lucifer (jereo fanazavana).
Icke dia afaka mifandray ihany koa ao anatin'io (eo ambony) lahatsoratra mifamatotra marika voafaritra eo ankavanana, amin'ny maha-mpankafy ny Brexit fa tsy mahita ny lalao ao ambadika. Noho izany, na eo aza ny sainy fa saika amin'ny lalana rehetra izy, dia matahotra aho fa amin'ny ho avy tsy ho lavitra dia hiaina tantara ratsy lehibe any ho any isika, izay midika fa nanjavona tampoka ny lazany. Na dia izany aza dia mpandahateny mahay izy ary manao izay hamoha ny olona maro. Manantena aho tamim-pahatsorana fa tsy hisy ny vokadratsin'ny fipoahana ny hetsika marina amin'ny alàlan'i Icke, fa raha hitranga izany dia fantatrao fa ampahan'io filalaovana an-tsakany sy an-davany io izy io. Mazava ho azy fa diso fanantenana be (fa tsy voalohany) Ve.
Ataoko indray ny antso maika ho tonga mpikambana. Tena manohitra mafy ny asako, arak'izay nohazavaina androany rehefa tsy naharitra ora maro ny tranokala. Mijanona ho zava-dehibe ny fanarahana amin'ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery hafa ary hahitana famakafakana mahaleo ny vaovao. Aza hadino foana fa ny sehatry ny hery mahery vaika dia azo refesina tsara sy mihazona ny fomba fihevitrareo, noho izany dia mijanona ho zava-dehibe ny mitandrina. Manantena aho fa afaka mandray anjara amin'izany. Izany no antony angatahako anao ho lasa mpikambana na a Fanomezana tokana manao. Ilaina maika ny fanohananareo.
Noho ny fitsipiky ny EU vaovao dia tsy miasa intsony ny tranokala fanomezana. Azonao atao koa ny manome vola mivantana amin'ny alàlan'ny: NL27 ABNA 0558 4469 22 amin'ny anaran'ny Martin Vrijland Foundation
Ny masoivoho misahana ny famoaham-baovao holatra (ANP) dia eo an-tànan'ny olona 1
Fiarandalamboarana fiara manaraka: Patrick Cavalle Courant conservation via Café Weltschmerz
Tags: ANP, Daivid, de, Featured, icke, resadresaka, John, London, haino aman-jery, Mol, vaovao diso, tena, feno, feno
14 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 44
Tsy hapetrako ao anaty harona iray ny atodiko, raha mahare an'i Icke toy izany aho, dia mandre fampahalalana avy amin'ny mpikaroka samihafa nandalo nefa tsy nahazo anarana sy anarana. Fampahalalana momba ny ohatra izay naterin'i Christopher Bollyn, Michael C. Ruppert, Bill Cooper, Michael Collins Piper sns.
Manoro hevitra ny rehetra aho hanao ny fikarohana azy manokana sy hanapa-kevitra fa tsy manaraka pasitera.
ps: ary ny fomba marina araka ny fitsipika Hegelian dia ny mieritreritra ny vahaolana (tanjona) alohan'ny hananganana ilay olana.
19 Septambra 2019 ao amin'ny 20: 17
I Icke dia tokony ho menatra, ny ampahany miaraka amin'i Cheney sy ny Lalao Ady dia 1on1 nalaina tamina mpikaroka toa an'i Webster Tarpley sy Michael C. Ruppert .. Ny boky Miampita ny Solofotsy avy any farany dia feno fitaovana. Ny antony iray hafa dia ny fanalavirana ny tarehimarika toa an'i Icke, indrindra indrindra satria tsy lazainy hoe ahoana no nahazoan'izy ireo ny loharanon-javatra ary tsy voalaza koa ireo mpikaroka voakasika. Ny fanoherana voafehy izay hilentika amin'ny fotoana mety.
14 Septambra 2019 ao amin'ny 19: 15
Mampanahy ahy fa zaraina kely ity lahatsoratra ity. Vakio eo
Rehefa tratran'ny mpanotra ny mpankafy dia eny aloha loatra.
De Telegraaf dia manana mpitsidika maro kokoa noho ity tranokala ity, tokony hampitombo avo roa heny io tranokala io satria tsy misy tombony sy hery any aoriany.
De Telegraaf, ireo "monsters" avy amin'ny faharoa W O.
Na iza na iza no nanendry ny ady ho ady "WORLD" ihany. jereo eo koa….
Diso diso i De Telegraaf, tsy afaka manao izany tsara tarehy kokoa isika
Na izany aza, mampanahy kokoa
14 Septambra 2019 ao amin'ny 19: 43
Indray mandeha aho dia niresaka tamina lehilahy iray tao amin'ny rejisitry ny vola tany Amsterdam izay nividy Telegraaf. Hoy aho: "Fantatrao fa propagandy daholo izany ary mandainga izay vidianao ao, tsy izany?"
Hoy ny navaliny: "Eny, fantatro izany, saingy vao mainka fiankinan-doha amin'ny kafe maraina sy ny gazety aho."
Ary araka izany dia mahazo fidirana foana ireo milina fampielezan-kevitra. Manonofy lavitra izany fantsona izany (hypnose) ary vakina tsara izay atiny rehetra ao anaty gazety. Te holavina ny Holandey, satria izany no fomban-drazana.
« Asa ve ao anaty ny 911? De Telegraaf dia mamaly ny fanontanianao rehetra!
Ny asterisk Disney Channel teo aloha dia nilaza fa nisy nanararaotra ny pedofy any Hollywood »
Total visits: 13.079.412